Ngwunye nke na-agbanwe agbanwe / eriri ụdọ na-agbanwe agbanwe
Ngwunye Na-agbanwe Na-edozi / Nwunye Na-agbanwe Ihe
ihe onwunwe: Rubber, Latex, Spandex.
mbukota: Dịka ọ dị na nnukwu spool na 200G-1000G ma ọ bụ obere ọkpọ dị na 4g-20g
Eriri na-agbanwe eri
Latex elastic eri
Emere ya na eri latex ejiri ya na polyester DTY yarn. Lee anyi nwere nkowa nke 37 #, 42 #, 52 #, 63 #. A na-ejikarị ya eme akwa, akwa, ime ọla, beading, DIY crafting and scrapbooking.
Eriri siri ike nke Spandex
A na-eji eriri spandex ejiri ya na polyester DTY yarn. Lee anyị nwere nkọwapụta nke 4075, 2070 na nke a bụ 40D + 75D * 2 .Ọ bụ ihe kachasị mma na-agbanwe agbanwe yana ezigbo mgbanwe ma ọ dịghị mfe ịka nká .Ọ na-ejikarị ya na sọks egwuregwu, sweta cuffs, fancy yarn, beading na ndị ọzọ na kpara ngwaahịa.
MH na-agbanwe eri nwere uru na: Ọdịmma Dị Elu, nke dị nro ma dị mma, Ike Mgbatị Dị Mma - Ihe Egwu Dị Ala nke Bregbaji Ma ọ bụ Fgha, resistancegba mbọ siri ike, Nkọwapụta zuru ezu nke nkọwa, Mbupu ngwa ngwa.
Ngwunye Na-agbanwe Egwu